I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) hplc =98% | AASraw Fat Loss
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / I-Methyltrienolone powder
SKU: 965-93-5. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-order ye-Methyltrienolone powder (i-965-93-5), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Methyltrienolone powder inokuba yinto enamandla kakhulu ye-androgen receptor binder yazo zonke i-steroids. I-Methyltrienolone idinga amanani amancinci kakhulu ukubona ukuzuza okukhulu kubukhulu kunye namandla. I-Methyltrienolone ayiguquki kwi-estrogen, kodwa ine-progesational activity eyenza ukwandisa iziphumo ze-estrogen.
I-video ye-Methyltrienolone powder
I-Methyltrienolone powder esisiseko Abalinganiswa
igama: I-Methyltrienolone powder
I-molecular Formula: C19H24O2
Isisindo somzimba: 284.39
Melt Point: 206-209 ° C
umbala: I powderall yellow light
Ukusetyenziswa kwe-Methyltrienolone ngokugqithisileyo kumjikelezo we-steroids
I-Methyltrienolone powder iphinde ibhekiswe njengeMetribolone (CAS 965-93-5), MT.
Usetyenziso oluninzi lweMethyltrienolone powder
I-0.5 milligrams (mgs) ukuya kwi-5mgs ngosuku lomda wokuhlula, ungadluli kwi-3 kwii-4 zeeveki zokusetyenziswa.
Isexwayiso kwi-Methyltrienolone powder eluhlaza
I-Methyltrienolone powder eluhlaza kakhulu kwaye i-androgenic kwaye inokubangela ukuba ilahleko kunye ne-acne enzima kulabo baxhomekeke kule miphumo. Kukho umngcipheko we-gynecomastia ngenxa yemiphumo yeprogestational ye-Methyltrienolone powder eluhlaza. Okuxhalabisa kakhulu ngeMethyltrienolone powder eluhlaza mhlawumbi isifo sobutywala sesibindi.
I-Methyltrienolone powder eluhlaza (MT) yakha imisipha kwaye iyatshisa amafutha. Kwaye i-steroid ebophelela ngokuqinileyo kwi-AR iya kuvuselela i-muscle synthesis kunye nokutshisa amaninzi amanqatha. Kodwa yinto enamandla kakhulu, enobungozi obunobungozi, obungabonakaliyo.
I-Methyltrienolone I-powder emfutshane (i-CAS 965-93-5)
I-Raw Methyltrienolone yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-Methyltrienolone powder (i-CAS 965-93-5) esuka kwi-AASraw
I-AAS eluhlaza inika ubumsulwa 98% I-Methyltrienolone ipowder eluhlaza kumalabhu angaphantsi komhlaba ukwenzela ukufumana inzuzo enkulu yobuninzi.
I-Methyltrienolone I-Raw powder Recipes